आँफुले भोग चलन गरेको जग्गा छाड्न ढेड करोड अफर – Halkaro
प्रकाशित मिति : २०७५, ९ आश्विन मंगलवार September 28, 2018
चितवन । बि. सं. २०२० साल देखि वसोवास गर्दै आएको जग्गा छाड्नका लागि एक करोड ५० लाख रुपैंयाको अफर आएको छ । यो घटना हो भरतपुर महानगरपालिका १० गैंडाचोकको । २०२० साल देखि गैंडाचोकमा वस्दै आउनु भएकि कान्छिमायाँ लामालाई आँफु बस्दै आएको जग्गा छोड्नका लागि सो रकम मिलाई दिने आश्वासन दिने व्याक्ति हुन चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद कृष्णभक्त पोख्रेल ।
पिडित परिवारले मंगलबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आँफुहरु अन्यायमा परेको जनाएको छ । पोख्रेलले बिभिन्न व्याक्तिहरु लगाई आँफुहरुले जग्गा छाडे १ करोड ५० लाख रुपैंया मिलाई दिने बताएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो । पोख्रेल बिगत लामो समय देखि जिल्लामा वकालतको काम गर्दै आउनु भएको थियो ।
२०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचन पछि उहाँ संविधान सभा सदस्य हुँदै अहिले सांसद हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले कानुन न्याय समितिका सभापति समेत रहनु भएको छ । २०२० सालमा सो स्थानमा अध्यावधि गरी वसेका लामाका परिवारलाई २०२४ सालमा बिकु लामा (कान्छिमायाँ लामाका श्रीमान) लाई १ विगाह १० कठ्ठा जोताह अस्थाई निस्सा प्रदान गरिएको थियो ।
त्य पछि बिकु लामाका दुई श्रीमतीलाई अंश लगाउँदा कान्छि मायाँका नाममा ५ कठ्ठा १९ धुर परेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कान्छिमायाँ की कान्छि छोरी पिकी लामा श्रेष्ठले २०४४ सालमा आमाको नाममा सो जग्गा नापि भई दर्ता भएको बताउनु भयो । त्यस पश्च्यात पुर्जा लिने समयमा आमाको नाममा रहेको जग्गा मध्ये जम्मा २ कठ्ठा १७ धुर मात्रै दर्ता भएको र अन्य भू माफियाले मनोमानी तरीकाले वाँडफाँड गरेको उहाँको आरोप छ । आमाको नाममा रहेको जग्गा शालीग्राम रेग्मी, शंकर प्रसाद अधिकारी, शिबप्रसाद लौडारी, लीलाधर आचार्यको नाममा ल्याई अहिले सम्म १३ पटक बिक्रि बितरण भई सकेको उहाँले बताउनु भयो ।
उक्त जग्गा अहिले लामा परिवारले व्यवस्थित रुपमा घर वनाई कम्पाउण्ड गरेर राखेका छन् । जग्गाको बिक्रि बितरण गरीएको भए पनि अहिले सम्म जग्गा किन्ने व्याक्तिहरु सो स्थानमा नआएको पिडित परिवारले जनाएको छ । तर स्थानिय राजनैतिक दलका नेताहरुले भने आँफुहरुलाई नियमीत रुपमा दवाव दिने प्रहरी कार्यालयमा लगरे राख्ने लगाएतका काम गरेको उनिहरुको गुनासो छ ।
यो समस्या आए पछि २०५३ सालामा जग्गा दर्ता वदर गरिपाउँ भनि बिकु लामाले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्बोच्च अदालतमा समेत रिट दाय गरेको स्मरण गर्दै कान्छिमायाँले भन्नुभयो “यहाँ हुने खानेका मात्र दिन रहेछन् हामी गरिब दुखिलाई कस्ले हेर्ने ।”
आँफुले लामो समय देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खालि गर्न कहिले प्रशासन आउँछ त कहिले दलका नेता भनाउँदा उहाँले भन्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो “लव्लि छ नि न्यैपाने लव्लि त्यसलेत हैरानै पारेको छ ।” आँफ्नो जग्गामा पनि वस्न नपाईने यो कस्तो बिडम्बना हो भन्दै उहाँले आक्रोस पोख्नु भयो ।
२० साल देखि बसोबास गर्दै लाएका लामा परिवारलाई २०७० सालमा जग्गा कव्जा गरि वसेको भन्दै उजुरी दर्ता गरीएको लामा श्रेष्ठले वताउनु भयो । अहिले यो मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा चालु अबस्थामा रहेको छ । तर उनिहरुलाई बिभिन्न बाहनामा मानसिक टचर दिने काम भईरहेको लामा श्रेष्ठले बताउनु भयो । जग्गको बिबाद निस्किए पछि आँफुहरुलाई पटक पटक प्रहरीले लाने, प्रहरी कार्यालयमा अव विवाद गर्दिन भनेर हस्ताक्षर गर भन्ने, धरपकड गर्ने जस्ता काम गरेको उनिहरुको गुनासो छ । घरमा बृद्ध महिला मात्रै भएको देखेर आँफुहरुलाई हटाउने प्रयत्न भएको उनिहरुको गुनासो छ । पटक पटक जग्गा छाडे ३ लाख, १० लाख, ३० लाख हुदै अहिले १ करोड ५० लाखको अफर गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
यता सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने आफूले कुनै पनि पक्षलाई प्रलोभन नदिएको दाबी गरे। उनले आफू सांसद नहुँदा अधिवक्ताको हैसियतले एक पक्षको अदालतमा वकालत गरे पनि सांसद भइसके पछि यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘हिजो वकालत गर्दा एक पक्षको वकिल थिएँ। त्यतिवेला मिलापत्र गराउन प्रयास गरियो पनि होला। वकिलको हैसियतले गरे। अहिले सांसद भइसकेपछि त्यस विषयमा के भएको हो जानकारी छैन। मैले कसैलाई प्रलोभन दिने कुरा पनि आँउदैन्,’ उनले भने, ‘अदालतले एउटाको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ। उसको हातमा सरकारी पूर्जा छ। उनीहरु केही हाम्रा कार्यकर्ता हुन्। त्यसैले अहिले मेरो नाम जोडिएर आयो। हामी नेता भइसकेपछि भन्ने भनेको कसैलाई अन्याय नहोस भन्ने नै हो।’
← चितवनमा पाच महीनाको अबधिमा ५सय ६५ गुण्डागर्दीका मुद्दा दर्ता
समाज सेबि गोबिन्द तिवारीद्वारा नेपाल प्रेस युनियन चितवन शाखालाई एक लाख रुपैंया सहयोग →